မန်းကိုကို ~ Mahn Ko Ko: ပလုံစီလာတဲ့ ကရင်တွေရဲ့ အသံ
□ လှိုင်သံ / ပဲ့တင်သံ
များမကြာခင်က KNU ရဲ့ (၁၅) ကြိမ်မြောက် အထွေထွေညီလာခံ ပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ် ။ မျက်
နှာသစ် မျက်နှာဟောင်း ခေါင်းဆောင်တွေလည်း အရွေးချယ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အလျို
လျို ပေါ်ထွက်လာခဲ့တယ် ။ အဖွဲ့နဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ ကျနော့်အနေနဲ့ ကောင်း
တယ် မကောင်းဘူး ၊ ဘာဖြစ်တယ် ဘယ်လိုတွေပေါ့ဆိုပြီး မပြောလိုပါ ။ သို့သော် နီးစပ်ရာ
မိတ်ဆွေအချို့နဲ့ စကားစမြည် ပြောဖြစ်ရာကနေ စုဆောင်းရရှိတဲ့ မေးခွန်းလေးတစ်ချို့ကို
တော့ မှတ်တမ်းတင်ထားချင်ပါတယ် ။ မိမိကိုယ်ကို အမျိုးသားရေး ခေါင်းဆောင်တွေလို့ ခံ
ယူထားသူတွေဆီ တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပေါက်ရောက်ပြီး ယူတတ်ရင် အကျိုးဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်
မယ်လို့ ယူဆမိလို့ပါ ။
ပထမ - ဆိုခဲ့တဲ့ ညီလာခံ မစမီကတည်းက စီကနဲ လျှံထွက်လာခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်
ရာ သတင်းတွေကို ဖတ်မိသူများကတော့ မှတ်မိကြမှာပါ ။ ခုတော့တစ်ခါ မထင်မှတ်တဲ့ အလှည့်
အပြောင်းတွေနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဖြစ်ပျက်နေတာတွေအပေါ် သတင်းသာမက အတင်းအဖျင်း
နဲ့ ထင်မြင် ခန့်မှန်းချက်တွေဟာလည်း ကရင်အသိုင်းဝိုင်းထဲ ပလူပျံနေပါတယ် ။ ဒါ့ပြင် အခြား
သော နိုင်ငံရေး ၊ စီးပွားရေးပိုင်းမှာ ပါးနပ်ပုံရတဲ့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ နှိုင်းချိန်ထိုး
ဖို့ မဆိုထားပဲ ၊ ကိုယ့်အဖွဲ့စည်းထဲတင် အဆိုးတွေ ပိုနက်ရှိုင်းမလာအောင် ပြီးပြီးသား ရလာဒ်
အတိုင်းပဲ ထားပြီး ၊ အလိုက်သင့် အထိုက်အလျောက် လိုက်ပါစီးဆင်းသွားကြဖို့ ဆန္ဒရှိသူတွေ
လည်း မရှားပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဆိုဆို သေချာတာက အကောင်းထက် အဆိုးဖက်က
အဲဒါကြောင့် ခြုံငုံမှတ်တမ်းတင်ချင်တဲ့ မေးခွန်းစာရင်းကတော့ အောက်ကအတိုင်းပါ ။
(၁) ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းလဲ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ KNU တွင်း ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ ကျင်းပပုံနဲ့ ဖြစ်စဉ် ၊
(၂) ခေါင်းဆောင်အချို့ရဲ့ အသက်အရွယ် ၊
(၃) ခြေလှမ်းသွက်လှတဲ့ ပြည်မအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ဆက်ဆံရေး ၊
(၄) ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ရှေ့တန်းရောက်လာခဲ့ပေမယ့် ၊ ၂၀၁၃ မှာ မှေးမှိန်လာပုံရတဲ့ အ
မျိုးသမီးများရဲ့ ကဏ္ဍ ၊
(၅) ခေါင်းဆောင်အချို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး ရေချိန် ၊
(၆) အဖွဲ့စည်းရဲ့ ရှေ့ဆက်ရင်ဆိုင်ရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်မှု ၊
(၇) ခေါင်းဆောင်အချို့ရဲ့ ပြုမူ လုပ်ကိုင် လှုပ်ရှား ဝတ်စားဆင်ယင်မှု - တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ် ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ ပြောခဲ့သလိုပဲ အဖွဲ့ဝင်လည်းမဟုတ် ၊ ဂဃနဏလည်း မသိတဲ့ ကျနော့်
မှာတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေ ၊ အစဉ်အလာရှိတဲ့ အဖွဲ့စည်းကြီးမို့ ပိုပိုသာသာ တွေးထင်မြင်မိတာတွေ
အနည်းကျဉ်း ရှိတာကြောင့် စကားဝိုင်းအချို့မှာ တီးခေါက်ကြည့်တဲ့အခါ ၊ အပေါ်က တင်ပြခဲ့တဲ့
မေးခွန်းတွေအပြင် အချို့ ဦးဆောင်သူတွေရဲ့ အားနည်းချက်တွေအပြင် ၊ အောက်ခြေဖက်က အ
ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ သတင်းတွေနဲ့ဝေးပြီး ကိုယ့်အဖွဲ့စည်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခြုံငုံ လိပ်ပတ်လည်အောင် မ
သိကြဘူးဆိုတဲ့ အမြင်နဲ့ ခံစားချက်တွေကိုပါ သိလာရပါတယ် ။
ကျနော့် တစ်သီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ သိမီမှု နည်းပါးတာရယ် ၊ မဆိုင်သူတွေကိုပါ ကြော်ငြာပေးနေ
သလို ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်နဲ့ မပြောသင့်ဖူးလို့ ယူဆတာရယ်တွေကြောင့် မဝေဖန်လို အသေးစိတ်
မပြောလိုပေမယ့် ၊ ဥာဏ်မီသမျှ ပြောရရင်ဖြင့် - အချို့သော တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ “ငါမှငါ”
ရယ်လို့ စိတ်ထဲမထားပဲ ၊ ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ နေရာယူထားသူတွေ အနေနဲ့ အရာရာကို ထည့်
တွက်ပြီး ဆင်ခြင်လုပ်ကိုင်ကြရင် အကောင်းဆုံးလို့ ယူဆပါကြောင်း ။
အပေါ်က ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့သာဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားရာမှာ မပါ
ရင်မပြီးတဲ့ အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းကိုလည်း စာကလေး တို့ထားလိုက်ချင်ပါတယ် ။
အဲဒါကတော့ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့စည်းအားလုံးနဲ့ မဆက်ဆံရင် မဖြစ်တဲ့ ပြည်မအာဏာပိုင်
အဖွဲ့စည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အပေါ်က ပြောခဲ့သလို လက်လှမ်းမီရာ လူအချို့နဲ့ စကားစမြည် ပြေဆိုဖလှယ်မိတဲ့အခါ
များမြောင်လှတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ အထင်အမြင်တွေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာမှာ ၊ အများစုကို ခြုံငုံမိ
တဲ့ အခြေခံအကျဆုံး မေးခွန်းတစ်ခုတော့ ထွက်လာပါတယ် ။ မဆန်းသလို ၊ ထူးလည်း မ
ထူးပါ ။ မူလလက်ဟောင်း မေးခွန်းတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ် ။
“ပြည်မအာဏာပိုင် အဖွဲအစည်းတွေ ရိုးသားမှု ဘယ်လောက်ရှိသလဲ” ဆိုတာပါပဲ ။
အချို့သူတွေအတွက် အဖြေရှိပြီးသား ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါမယ် ။ ကျနော့်အနေနဲ့လည်း ဒီနေ
ရာမှာ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ မပေးလိုပါဘူး ။ မိမိ ထင်တာသာ အမှန်မို့ ၊
ဖတ်ရှုသူများရဲ့ ရင်ထဲက သဘောအတိုင်းပါဗျာ ။
၀၈ ၊ ၀၁ ၊ ၂၀၁၃
Posted by မန်းကိုကို at 1/08/2013
ကေအန်ယူခေါင်းဆောင်တွေ ငြိမ်းချမ်းေ၇းဆိုပြီး လုပ်နေကြတာ ဘယ်လိုတွက်ပီး လုပ်တာလဲ။ သေချာ၇င်ဝိုင်းထောက်ခံမယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ကိုယ်ကျိုးေ၇ှး၇ှုတာတို့ သူငယ်ပြန်လို့လုပ်တာတို့ဆို၇င်တော့ ဒီလူတွေသမိုင်းတ၇ားခံဖြစ်မယ်။ ပီးတော့ သေခါနီးသူငယ်ပြန်နေတဲ့လူတွေအတွက် ဘယ်သူကတာဝန်ခံပေးမလဲ။ သူတို့ကလုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး သေတော့မှာ ငါတို့ကခံ၇မှာ။
မန်းကိုကို January 13, 2013 at 6:19 PM
အတိုချုပ်ပြီး စာပြန်ပေးလိုက်ပါရစေ ။
KNU မဟုတ်တဲ့ ကျနော်လည်း ဘယ်လိုတွေတွက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာ လုံးဝကို မသိပါဘူး ။ အဝေးကနေ ခန့်မှန်းလိုပဲ ရနိုင်ပါတယ် ။ ဒီတော့ အဖြေက KNU အနေနဲ့ ခုထက် ပိုပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့ လိုကောင်း လိုနိုင်တယ် ဆိုတာပါ ။
နောက်တစ်ခု ထောက်ခံဖို့ မထောက်ခံဖို့ကတော့ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်ခု စဉ်းစားရမှာက အခြားထောက်ခံစရာ ဘယ်သူရှိသလဲ ဆိုတာပါ ။ နောက်ပြီး ခုခေတ်ကလည်း တစ်ယောက်ကောင်းခေတ် မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ စုဖွဲ့ လုပ်ကိုင်မှသာ ထိရောက်မှုရှိတာလည်း ထည့်တွက်ဖို့ လိုပါတယ် ။
အဆုံးသတ်အနေနဲ့ ပြောချင်တာက KNU ဟာ အပြောင်းလဲ အကွေ့ချိုးတစ်ခုကို ရောက်နေပါတယ် ။ အားပေးမှုတွေ ၊ ဖြည့်တင်း ပံ့ပိုးမှုတွေ ၊ ထောက်ခံမှုတွေ လိုအပ်နေတာလည်း သေချာပါတယ် ။ လက်လှမ်းမီရာ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မေးမြန်း ပြောဆို ဆွေးနွေးတာက အကောင်းဆုံးလို့ ယူဆပါတယ် ။
at. And after this post "ပလုံစီလာတဲ့ ကရင်တွေရဲ့ အသံ".
:) I do have2questions for you if you do not
mind. Is it just me or does it look as if likeafew of
:-P And, if you are writing on other places, I'd like to follow everything fresh you have to post. Could you list the complete urls of all your community sites like your Facebook page, twitter feed, or linkedin profile?
Also visit my blog post : forja toledo